ရော့စ် ဒန်ကလေကို မူးယစ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီး
8 มิ.ย. 2561 - 22:34 น.
အရင်ကလည်း မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရ
မြန်မာမီဒီယာလောကမှာ နာမည်ကြီး သတင်းစာထုတ်ဝေသူ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား မစ္စတာ ရော့စ် ဒန်ကလေ နဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံသားတဦးအပါဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၇ ဦးကို ဇွန် ၇ရက်က ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး အရေးယူ ထားပါတယ်။
မစ္စတာ ဒန်ကလေ ဟာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းစာ မြန်မာတိုင်းမ်စ်ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပြီး အရင်ကလည်း မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရပြီး အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ရော့စ်ဒန်ကလေ အမည်နဲ့ ငှားရမ်းထားတဲ့ ဗဟန်းမြို့နယ် သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက် စမ်းရေတွင်းလမ်းက နေအိမ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ် သုံးစွဲနေတယ်လို့ သတင်းရရှိတဲ့အတွက် ဗဟန်း မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ အမှတ် (၄၂) မူးယစ် တပ်ဖွဲ့စုတို့ ပူးပေါင်းပြီး သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ အတူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရော့စ်ဒန်ကလေဟာ မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့နဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ မြန်မာတိုင်းမ်စ် သတင်းစာအပြင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထုတ် ဖနွမ်းပင်ပို့စ်သတင်းစာကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒန်ကလေ အပြင် ဗဟန်းမြို့နယ်က နေအိမ်ကို သူနဲ့အတူ ငှားရမ်းပြီး မီဒီယာလုပ်ငန်းတခုကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဂျွန် မက်ကမ်ဇီးကိုလည်း အတူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဗဟန်း မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဇွန်လ ၇ ရက်ကတည်းက ရမန် နှစ်ပတ်ယူကာ ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သွားရောက်ရှာဖွေရာမှာ သူတို့ ၂ ဦးအပြင် အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မိန်းကလေး ၅ ဦးကိုလည်း အတူ တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အဲဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာ မစ္စတာ ဒန်ကလေရဲ့ ရည်းစား ဖြစ်သူ မိန်းကလေးလည်း ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူတို့ ၇ ဦးအပြင် နေအိမ်က အိမ်အကူ အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ အမျိုးသားတဦးကိုပါ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၉ ဦး စလုံးကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လတ်တလော စစ်ဆေးချက်တွေအရ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား ဂျွန် မက်ကမ်ဇီးဟာ ရော့စ်ဒန်ကလေနဲ့အတူ GO လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မီဒီယာလုပ်ငန်းတခုတည်ထောင်ကာ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေ သူလို့ ထွက်ဆိုထားတဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့ဘဏ် မှာလည်း လုပ်ကိုင်နေသူလို့ ထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်ကပဲ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတွေကို ထောင်ဒဏ်အစား လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်သာ ပြောင်းလဲချမှတ်ဖို့ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို သမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း မူးယစ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင် လိုက်တဲ့ ဥပဒေအသစ်မှာ သတ်မှတ်ပမာဏအထက် လက်ဝယ်တွေ့ပါက ရောင်းချရန်အလို့ငှာ လက်ဝယ်ထားတယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ကို ကျခံရမှာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်။
อัลบั้มภาพ ရော့စ် ဒန်ကလေကို မူးယစ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီး